Ahoana ny fanahafana ny effets hafainganana amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Como manahafa ny vokany hafainganam-pandeha miaraka Photoshop ho an'ny sarinao dia zavatra iray izay azo ampiasaina amin'ny endrika na sary sasany, azontsika atao alaivo tahaka ny hoe mihetsika haingana ny zavatra mijanona. Fomba iray mahaliana hahazoana a vokatra azo ampiharina amin'ny tetikasa sasany, mety ho bebe kokoa aza mora sy mora amin'ny fotoana sasany, ohatra, ny sarin'ny fiara mandeha dia mora kokoa ny maka statically.
Ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny tanjona kendrena hafa, a fihetsiketsehana izay amin`ity tranga ity dia azo ampiasaina manahafaingana ny hafainganana. Ny azo atao Photoshop Tsy voafetra izy ireo raha ny famoronana retouching sary sy montage, noho izany dia mahaliana ny mahafehy ireo karazana fitaovana ireo ihany koa.
Photoshop manana andiana sivana iray manontolo izay azo ampiasaina hanamboarana ny vokany sasany, ohatra, azontsika atao ny mampiasa ny vokan'ny hetsika mba hanahafana fa misy mihetsika ny zavatra iray mijanona. Minitra vitsy monja dia ho afaka hamorona ity famaranana mahaliana ity amin'ny sarintsika isika.
Ny zavatra voalohany ilaintsika dia a sarin'ny zavatra iray izay mety manana fihetsiketsehana, amin'ity tranga ity dia hampiasa fiara isika. Vantany vao misokatra ny sary, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia averina indroa ny sosona lehibe, ny iray amin'ireo sosona dia hanana ny manjavozavo ary ny iray kosa tsy hanana.
Raha vantany vao noforonina ireo sosona dia hampihatra a voan'ny blur, noho izany dia mandeha any amin'ny tampon'ny ambony isika Photoshop ary mitady ny safidy an'ny sivana / manjavozavo / ahetsika. Ity vokatra ity dia tsy tokony apetraka afa-tsy amin'ny sosona iray ihany, mitahiry sosona hafa tsy misy vokany isika.
Aorian'ny fampiharana ny blur ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia manova filaharanas mametraka ny sosona izay tsy misy fiatraikany ambonin'ilay sosona izay mahomby. Vantany vao napetraka ny sosona, ny zavatra manaraka hataontsika dia mamorona sarontava, ity sarontava ity dia tokony ho eo amin'ny sosona ambony (ilay tsy misy vokany).
Miaraka amin'ny fanampian'ny maska ​​sosona azontsika esory ny faritra amin'ny sosona ambony izay tsy ahitana ny sivana mihetsika dia tratra ny vokany satria tsy misy mihetsika ny sosona ny fiara raha mbola kosa ny sosona ambany. Ity sivana ity dia azo ampiasaina amin'ny tetik'asa sary tsy manam-petra hanefitra ny karazana vokatra rehetra, amin'ity tranga ity dia sarin'ny fiara fotsiny izany fa mety tena ilaina amin'ny sary dokam-barotra amin'ny fiara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fanahafana ny effets hafainganana amin'ny Photoshop